सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » पैसा कमाएर मात्र हैन वचत गरेर धनी बनिन्छ..,पढ्नुहोस् !
पैसा कमाएर मात्र हैन वचत गरेर धनी बनिन्छ..,पढ्नुहोस् !
काठमाडौं – पैसा कमाउन मात्र होइन वचत गर्न जानियो भने मात्र मानिस धनी बन्छ । सँग*सँगै शक्तिशाली पनि । कुनैपनि व्यक्ति कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ । किनभने जति कमायो उति खर्च गर्ने मानिस कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । तर, आफ्नो कमाई*बाट बचत गर्दै थप लगानी गर्दै अघि बढ्ने मान्छे अवश्य धनी हुन्छ । धनी बन्न त्यति सजिलो छैन । मान्छे न कमाएर मात्रै धनी हुन्छ, न त बचत गरेर मात्रै । प्रत्येक समय उपयुक्त निर्णय गर्दै पैसाको सदुपयोग गर्न सक्ने मान्छे मात्रै धनी हुन्छ । यस्तो गर्नसक्ने क्षमता एकदमै कमसँग मात्रै हुन्छ । अर्थशास्त्री स्टुअर्ट रदरफोर्डले भनेका छन्–बचत धनी मानिसले मात्र गर्ने कुरा होइन बरु यो गरीबह रुको साथी हो । आफ्नो कमाइ*बाट नियमि तरुपमा बचत गर्न सक्ने हो भने गरिब मानिस पनि धनी बन्न सक्छ। तर, २ र ४ हजार वचत गरेर के नै हुन्छ र भन्ने मानिस जुन अवस्थामा छ, त्यहाँभन्दा माथि उठ्न निकै कठिन हुन्छ।
आजको स-सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइ बाट बचत गर्नुहोस् । तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने ? त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ । एकदिन, एक महिना वा एक वर्ष मात्रै बचत गरेर पनि हुँदैन । तपाईंले सँधैका लागि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । एक वर्षसम्म दैनिक १० रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्ने हो भने एक वर्षमा करिव ३,६५० रुपैयाँ हुँन्छ ।
तपाईं सिगरेट पिउनुहुन्छ भने दिनको एउटा सिगरेट कम गर्नुहोस् । र, त्यो पैसा बचत गर्नुहोस् । अनि यसरी बचत गरेको पैसा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था*हरुमा राख्नुहोस् । यी संस्था*हरुले ब्याज दिन्छन् । र, तपाईको पैसाको सुरक्षा पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको ब्याजले मात्रै पनि पुग्दैन । त्यसैले यसरी बचत गरेको पैसाले बीमा गर्नुहोस् । बीमा गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो लाखौंको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्नुहुन्छ । बीमा गर्नका लागि खर्च गरिएको रकम पनि बचत नै हो । खर्च गर्नुअघि १० पटक सोच्नुहोस् कि यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर । यदि तपाईं*को आवश्यकता होइन भने खर्च गर्नतिर नलाग्नु होस् ।
खुशीको खबर : भारतले नेपाललाइ प्याज नदिए पनि..,चिनले नमागि पठायाे ७ लाख किलाे प्याज !
खाली केन्द्रमा बसेर मात्रै हुँदैन बोर्डर*मै पुग्नुपर्छ : डिआइजी सुरज श्रेष्ठ
भद्रगोलका जयन्तेको फेसबुकले जुराएको सुन्दर परिवार..,फेसबुकमा परेको थियो लब !
आज कार्तिक ०२ गते सोमबारको राशिफल भगवान शिबको दर्शन गरि हेर्नुहोस
नेपाली महिला समृद्धि बनिन् पहिलो अमेरिकी सेनाको उच्च पदमा पुग्ने !
छोरा-छोरीको माया पाउन आमा-बुबा लाई प्रेम गर्नुपर्छ : डा. योगी विकाशानन्द
औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो याद गर्नुभएको छ ? (जान्नुहोस्)
यी काम हरेक बिहानी गर्नुस् तपाईको दिन शुभ हुन्छ !
भोलिको राशिफल श्री दक्षिणकाली माईको दर्शन गरि हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बल्ल सिमा विवादबारे मुख खोले ”हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं” भने !
आलम*लाई नख्खु कारागार*मा भेट्न आउने र कैदीबन्दी संग*को कुराकानी सबै रेकर्ड हुने
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे चर्चित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर !
भारतीय एसएसबीलाइ धपाएर भारतले मिचेको सिमानामा पुगी नेपाली झन्डा फहराए नेपालीले !